Horyaalka Premier League Guddoomiye Cusub U Doortay Haweenay Madax Ka Ahayd Barnaamijka XAYAWAANKA Ee Telefishanka Discovery | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(14-11-2018) Horyaalka kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa doortay guddoomiye cusub oo beddelaya midkii hore oo dhowaan ku dhawaaqay inuu is casilayo.
Guddoomiyihii hore oo lagu magacaabo Scudamore ayaa shaaciyey in bisha dambe ee December uu soo afjarayo muddo 19 sannadood oo uu maamulayey horyaalka dunida ugu xamaasadda badan ee Premier League, waxaana beddeli doonta Susanna Dinnage oo ah haweenay saxafiyad ah.
Dinnage oo hore uga tirsanaan jirtay telefishanka Discovery, ayaa waxay madaxweyne ka ahayd channelka baahiya xayawaanka dunida, laakiin laga bilaabo hadda waxay maamuli doontaa horyaalka Premier League.
Markii loo doortay guddoomiyaha ayaa waxay Dinnage sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay mashruuca ay qaybta heerka sare ah ka qaadanayso ee horyaalka Premier League, waxaanay ballan-qaadday inay ka shaqayn doonto horumarinta horyaalka iyo guulaha uu gaadhayey sannadihii u dambeeyey.
Dinnage ayaa waxay noqotay qofkii saddexaad ee madax ka noqda horyaalka Premier League, waxaana ka horreeyey ninka ay shaqada kala wareegayso ee Scudamore iyo guddoomiyihii ugu horreeyey ee Rick Parry.
Haweenaydan ayaa waxay leedahay khibrad dhinaca warbaahinta ah, waxaana ka hor intii aanay bishii January ee 2009 ku biirin telefishanka Discovery, ay tobankii sannadood ee ka horreeyey ka shaqaynaysay telefishanka Channel Five, waxaana uga sii horreeyey oo ay shaqadeeda ka bilowday MTV.